သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု - Xinhua News Agency
ကိုလံဘို၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများလှူဒါန်းပေးသည့် အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား နီးကပ်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန် စေတနာကောင်းဖြင့် ကူညီပေးမှုအပေါ် သီရိလင်္ကာအကြီးတန်း အရာရှိကြီးများက ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရက်ရက်ရောရော ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်၏နောက်ဆုံးလှူဒါန်းမှုတွင် ဘက်စုံကြည့်မော်နီတာများ၊ အသက်ရှူခက်ခဲသူများအတွက် အဆင့်မြင့်အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးစက်များ၊ အောက်ဆီဂျင်အာရုံခံကိရိယာများ၊ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါများနှင့် အခြားပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လှူဒါန်းမှုများ၏ တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၃၅,၀၀၀ ရှိကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံး၏ တွစ်တာ အကောင့်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ် လကစတင်ပြီး အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၅၉၃,၀၇၂ ဦး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
COLOMBO, Jan. 12 (Xinhua) — Sri Lanka on Wednesday commended China for its donation of medical equipment to Sri Lanka’s health sector in the fight against COVID-19.
The latest Chinese donation includes multipara monitors, high flow oxygen nasal therapy machines, oxygen concentrators, oxygen cylinders and other items.
Sri Lanka has detected 593,072 positive patients since March last year. Enditem
Related Topics:တရုတ်နိုင်ငံမှလှူဒါန်းမှု သီရိလင်္ကာ